Diode Laser Hair Removal Factory |China Diode Laser Hair Removal Manufacturers and Suppliers
milina fanalana volo laser portable 3 amin'ny 1
Portable diode tamin'ny laser volo fanesorana milina manambatra ny tombotsoan'ny 3 wavelength 808nm, 755nm ary 1064nm, izay samy hafa tamin'ny laser toetra.
Misy karazany telo azo atao:
Ny halavan'ny onjam tokana: 755nm / 808nm / 1064nm
halavan'ny onjam roa: 755nm + 808nm / 808nm + 1064nm
Ny halavan'ny onjam-telo: 755nm+808nm+1064nm
Ny milina dia natao ho an'ny halalin'ny sela samihafa sy ny firafitry ny follicle volo mba hahazoana antoka ny vokatra mahomby indrindra sy tsy misy fanaintainana.
FDA nankatoavina 755nm 808nm 1064nm 3 amin'ny 1 Diode Laser Hair Removal Machine
Razorlase diode tamin'ny laser Mitambatra telo onjam ny halavan'ny onjam ny 755nm & 808nm & 1064nm, izay mety tsara sy lalina ny volo follicle.Ny melanine ao amin'ny follicle volo dia hisintona tanteraka ny angovo laser ary ho mafana.Amin'ny farany dia ho simba ny cellule stem follicle volo.
755nm 808nm sy 1064nm Diode Laser Hair Removal Machine
755 nm ho an'ny hoditra fotsy (fanesorana volo tsara sy volamena);
808 nm ho an'ny hoditra tsy miandany mavo (fanala volo volontsôkôlà);
1064 nm ho an'ny hoditra mainty (fanalana volo mainty)
Araka ny fitsipiky ny fifantenana hisakana ny fiasan'ireny, tamin'ny laser angovo dia
levonin`ny loko mainty, ary avy eo ny volo very ny fahaizany mba hamerenana indray.Nandritra ny dingan'ny fitsaboana, ny rafitra fampangatsiahana safira tsy manam-paharoa dia afaka mahomby
miaro ny epiderme amin`ny may, hahatratra tsy maharary, haingana, ary maharitra volo fanesorana.
FDA sy TUV Medical CE nankatoavina 3 wavelength diode laser
Toeram-pitsaboana avo lenta 980nm diode laser vascular fanesorana milina 980nm diode laser hala fitsaboana
1.980nm tamin'ny laser no optimum absorption spectrum ny Porphyrin vascular sela.Ny sela vaskular dia mandray ny laser mahery vaika amin'ny halavan'ny onjam-pandrefesana 980nm, misy ny fanamafisana, ary farany dia miparitaka.
2. Mba handresy ny nentim-paharazana tamin'ny laser fitsaboana redness faritra midadasika ny fandoroana ny hoditra, matihanina famolavolana tanana-sanga, mamela ny 940nm/980nm tamin'ny laser taratra dia mifantoka amin'ny 0.2-0.5mm savaivony isan-karazany, mba hahafahan'ny angovo mifantoka kokoa hahatratra ny sela kendrena, sady tsy handoro ny hoditra manodidina.
3. Laser dia afaka mandrisika ny dermal collagen fitomboana raha vascular fitsaboana, mampitombo ny epidermis hatevin'ny sy ny hakitroky, ka ny lalan-dra kely dia tsy miharihary, miaraka amin'izay koa, ny hoditra elasticity sy ny fanoherana dia nitombo be.
Portable 3 wavelength diode laser hair removal epilation fitaovana
3 onjam-peo avo roa heny handpiece Diode tamin'ny laser volo fanesorana fitaovana
Ny 755nm 808nm sy 1064nm diode laser hair removal machine dia novokarina araka ny fivoaran'ny volo laser.
tsena fanesorana.Mampiasa onjam-peo tokana 808nm / 755nm / 1064nm izy io mba hidirana amin'ny hoditra mankany amin'ny follicle volo.
980nm vascular fanesorana fitaovana laser diode manala lalan-dra mena